MADAXWEYNE PASTE PRINTER
Mashiinka Meelaynta SMT
MAKIINADDA ALXAARKA DHAQAN
Sidee loo doortaa xalka madaxa meelaynta habboon ee mashiinnada meelaynta sare ee SMT?
Markay shirkaduhu doortaan mashiinnada meelaynta horumarsan, saddexda shuruudood ee aasaasiga ahi waa saxsanaanta meelaynta sare, xawaaraha meelaynta degdegga ah, iyo xasilloonida sare si loo hubiyo meelaynta xawaaraha sare iyadoo lala kulmayo saxnaanta meelaynta qayb yar. Si loo gaaro saameynta la rabay, meeleyn ku habboon ...
Dareemka ku jira mashiinka meelaynta SMT waa mid aad muhiim u ah, wuxuu leeyahay nooc cayiman
Mashiinka meelaynta wuxuu u dhigmaa aalado otomaatig ah. Ficiladeeda oo dhan waxaa gudbiya dareemayaal kadibna xukuma oo ku shaqeeya maskaxda weyn. Shirkadaha Topco waxay kula wadaagi doonaan in mashiinka meelayntu leeyahay nooc dareemayaal cayiman. 1. Dareeraha cadaadiska Mashiinka meelaynta, oo ay ku jiraan v ...
Hordhaca nidaamka qalabka wax soo saarka SMT
Abuuritaanka khadka wax soo saarka SMT waa mashruuc nidaamsan. Guusha samaynta khadadka wax soo saarka smt waxay si toos ah u saamaysaa hawlgalka caadiga ah ee khadka wax soo saarka SMT, haddii ay ku guuleysan karto natiijooyinka laga filayo, iyo haddii ay dib u soo ceshan karto maalgashiga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah ...
Maxaan fiiro gaar ah u leeyahay ka hor inta aanan isticmaalin mashiinka meelaynta
Marar badan, si loogu sahlo isticmaalka qalabka korontada, ma raacno tilmaamaha. Tani waxyeello uma geysaneyso qalabka korontada oo keliya, laakiin sidoo kale waxay yareyn doontaa cimriga noloshiisa. Tani sidoo kale waa kiis markaan isticmaaleyno mashiinka meeleynta. Waa inaan raacno tilmaamaha Ilmaha loo baahan yahay ...
Habka wax soo saarka SMT
1. daabacaadda shaashadda: doorkeedu waa in la sii dhejiyo ama la isku dhejiyo xabagta alwaaxa PCB-ga lagu xiro si loogu diyaariyo alxanka qaybaha. Qalabka loo adeegsaday waa mashiinka daabacaadda shaashadda xariirta (mashiinka daabacaadda shaashadda), oo ku yaal safka hore ee khadka wax soo saarka SMT. 2. Qeybinta xabagta: waxay ka daadinaysaa koolada t ...
GUS - cilmi baarista iyo horumarinta mashiinka maaskaro
Maaskarada, sida “heerka” iyo ilaha istiraatiijiga ah ee ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa, ayaa gabaabsi ku ah baahida adduunka oo dhan, xitaa meelaha qaarkood. 'Dagaalkan faafa', waxaan horay u joojin karnaa aafada, dadkana waan badbaadin karnaa waqti hore waxaanan ka gudbi karnaa dhibaatooyinka earlie ...
Da'da 5G, waxaa jiri doona isbadalo waaweyn oo dhankaan ah
Marka loo barbardhigo tikniyoolajiyadda isgaarsiinta ee soo jireenka ah, 5G waxay leedahay waxqabad xooggan, muuqaallo badan iyo deegaan cusub, oo si wanaagsan u dabooli kara shuruudaha looga baahan yahay shirkadaha wax soo saarka dhaqameed ee shabakadda bilaa-wareegga ah ee wax-soo-saarka caqliga leh, iyo wadista macluumaadka ...
1. isku imaatinka hal dhinac ah: Kormeerka soo socda => koollada alxan-shaashadda ah (dhejiska dhejiska) : kormeerka imanaya => dhinaca PCB A shaashadda xaraashka shaashadda xaraashka (s ...
Dabaqa 3-aad, No. 225, Wadada Dhexe ee Wanfeng, Shajing, Degmada Baoan, Shenzhen